BNI Madagascar sy ny Mvola : fiaraha-miasa manampy sy miaro ny mpanjifa | NewsMada
BNI Madagascar sy ny Mvola : fiaraha-miasa manampy sy miaro ny mpanjifa
Ho fanampiana, indrindra ho fiarovana ny mpanjifa, vita sonia omaly, ny fiaraha-miasa eo amin’ity BNI Madagascar sy ny Mvola. Afaka mandray na mametra-bola any amin’ny BNI izay mampiasa Mvola rehetra. Manamora ny fikirakirana vola izany eo amin’ny mpanjifa, miaro azy ireo amin’izay mety hataon’ny mpanendaka na mpangalatra, indrindra any ambanivohitra. Fomba iray hanazarana ny rehetra hampiasa vola amin’ny alalan’ny teknolojia vaovao koa izany. Mbola maro loatra, amin’izao fotoana izao, ireo mpivarotra, mpanangom-bokatra zatra mitahiry sy mampiasa lelavola mivantana, fomba izay tokony hialana miandalana amin’izao vaninandro izao.
Ho an’izay mpiasa manana petra-bola ao amin’ny BNI, mora ho azy ireo ny mandray ny karamany avy hatrany amin’ny MVola, tsy lany fotoana amin’ny filaharana intsony, afaka mividy zavatra avy hatrany any amin’ny tranombarotra maro. Tsy voatery hitondra lelavola intsony. Fomba iray fandoavam-bola tsotra indrindra ny Mvola, fito taona izao eto Madagasikara, amin’ny tambajotra Telma manerana an’i Madagasikara. 9.000 ireo toerana misy Mvola, miara-miasa amin’ny toeram-pisakafoana, tobin-tsolika, trano fandraisam-bahiny… Miaro ny mpanjifa, izay raha fintinina ny fiaraha-miasa eo amin’ny BNI sy ny Mvola. Fitaovana tsotra fampiasa amin’izany, mandritra ny 24 ora, ny finday, izay efa fampiasan’ny rehetra ankehitriny.
NY BNI sy ny « Salon de l’Auto »
Fanindroany izao ny BNI Madagascar, mpiara-miombon’antoka amin’ny « Salon de l’Auto », hatao ny 5 hatramin’ny 8 oktobra ho avy izao eny amin’ny CCI Ivato. Tanjona ny manantona akaiky kokoa ny mpanjifa. Mamaly ny hetahetan’ny mpanjifa, samy hahitan’ny rehetra tombontsoa mitovy, iarahana amin’ireo mpandray anjara, Materauto, Continental Auto, Madauto, Sodirex, Toyota Rasseta, ID Motors, CFAO.
Hampahafantatra bebe kokoa momba ny fampindramam-bola, hividianana fiara, araka izay ilain’ny mpanjifa, orinasa na olon-tsotra ny BNI amin’io fotoana io. Tolotra iray, ohatra, ny « Crédit Vaika » ho an’ny olon-tsotra. Hampahafantatra ireo fiara amidiny ihany koa ireo orinasa rehetra miaraka amin’ny BNI ireo, hahitan’ny mpanjifa izay tadiaviny. Fomba fanao izany maneran-tany, fiaraha-miasan’ny banky, tranombarotra na orinasa hanosehana ny toekarena, araka izay sehatra misy azy. Hanamora ny fomba fahazoan’ny mpanjifa fiara ny BNI, hampahafantatra ireo tolotra ao aminy.